Maxkamadda gobolka Banaadir oo fasaxday CC Shakuur
Maxkamadda gobolka Banaadir oo fasaxday CC Shakuur [Daawo]
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday in aan wax dembi ah lagu helin Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxayna go'aamisay in la sii daayo.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxay Xeer Ilaalinta kusoo eedaysay inuu qeyb ka ahaa abaabul lagu waday Gurigiisa oo la doonayo in xilka looga qaado Madaxweyne Farmaajo.
Kadib markii ay Maxkamadda dhageysatay eedaha loo soo jeediyay Siyaasigan, ayaa waxay shaacisay in aan jirin wax cadeyn ah oo muujinaya dembiyada lagu soo xiray CC Shakuur.
Gudoomiyaha Maxkamadda gobolka Banaadir, Aweys Sheekh Cabdullahi ayaa dhaaciyay in CC Shakuur wixii maanta ka dambeeya uu yahay qof xur ah, islamarkaana lagu waayay dhamaan eedaymihii lagu soo xiray markii hore.
Xalay ayaa CC Shakuur lagu soo daayay damaanad, iyadoo saakay dib loogu celiyay Maxkamadda oo maanta laga sugayay Xeer Ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir cadeymo ku aadan kiiska, iyadoo oo 48 saac loo qabtay shalay.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur xarigiisa waxay Maxkamaddu sheegtay in aan loo marin sifo sharci ah, oo aan loo haysan warqad maxkamadeed. weerarkii lagu qaaday Gurigiisa CC Shakuur 18-kii bishan waxaa fulisay NISA oo 6 kamid ah ilaalladiisa dishay.
Maxkamadeynta CC Shakuur oo dib loo dhigay [Akhri Sababta]
Soomaliya 20.12.2017. 17:55
Waxaa dib u dhigay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah CC Shakuur kadib markii...
Wararkii ugu dambeeyay Qarax ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 04.02.2018. 23:38
Qarax ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay khasaaro
Soomaliya 05.04.2018. 10:54
Soomaaliya: Askar lagu dilay Muqdisho
Soomaliya 02.01.2018. 10:40
Maxay kusoo dhamaatay Maxkamadaynta CC Cabdishkuur?
Soomaliya 19.12.2017. 21:05
Dilal ka dhacay Muqdisho iyo NISA oo Howlgal samaysay [Sawirro]
Soomaliya 07.02.2018. 11:13